मन्त्रीले नै मन्त्रालयमा किन पत्रकार सम्मेलन गर्न पाएनन् ? - Samudrapari.com
मन्त्रीले नै मन्त्रालयमा किन पत्रकार सम्मेलन गर्न पाएनन् ?
काठमाडौं – कुनै व्यक्ति लोकसेवाबाट प्रतिस्पर्धा गरेर उच्च तहमा पुग्ने भनेको मुख्य सचिव वा मन्त्रालयको सचिव हो। तर, राजनीति गर्नेहरूले नै ती पदाधिकारीलाई चलाइरहेका हुन्छन्, र बेला बेला मन्त्री र सचिवबीच टकराव भइरहेको खबर बाहिर आइरहन्छन् ।
पछिल्लो समयमा मन्त्रीलाई सचिवस्तरका कर्मचारीले अटेर गर्ने गरेको पाइएको छ। मुख्यतः विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवबीच समन्वय हुन नसक्दा कतिपय काम अन्योलमा पर्ने गरेका छन् भने मन्त्रालयका महत्वपूर्ण फाइलहरू पनि त्यत्तिकै अड्किएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिवबीच अधिकांश समय मन्त्रीपिच्छे पानी बाराबारसम्मको स्थिति सृजना हुने गरेको छ।
एक हप्ताअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारीको जिम्माबाट विनाविभागीय बनेका मन्त्री गिरीराजमणी पोखरेलले आफ्नो ८० दिने प्रगति विवरण सुनाउँदै भने,‘मलाई मन्त्रालयका सचिव किरण रेग्मीबाट पछिल्लो दिनमा निकै असहयोग भयो। असहयोग गर्नेलाई पनि सहयोग गरिरहन्छु। मन्त्रालयमा धर्ना, जुलुस आउँदा समेत रेग्मी चुप लागेर बस्नुभयो। उहाँको काम त वार्ता समिति बनाएर समस्या समाधानका लागि पहलकदमीको भूमिका निर्वाह गर्ने हो नि’पोखरेलले थपे, म आउँदा उहाँ हाजिर गरेर निस्किहाल्नुहुन्थ्यो। स्वास्थ्य सचिव पछिल्लो एक सातादेखि मेरो सम्पर्कमा पनि रहनुभएन। कामहरू रोकियो। मैले मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरि बिदा लिन चाहेको थिएँ तर त्यो अवसर मलाई मिलेन। नयाँ मन्त्रीको साइत साढे १० बजेनै रहेछ त्यसपछि कार्यक्रम अन्यत्रै सारियो।’